သင့်ကလေးတွေမေးတတ်တဲ့ ခက်ခဲတဲ့မေးခွန်းတွေကို ဘယ်လိုကျော်လွှားမလဲ?
HomeLifestyleသင့်ကလေးတွေမေးတတ်တဲ့ ခက်ခဲတဲ့မေးခွန်းတွေကို ဘယ်လိုကျော်လွှားမလဲ?
“ကောင်းကင်က ဘာကြောင့်ပြာတာလဲမေမေ” “ကလေးလေးတွေက ဘယ်ကနေဖြစ်လာတာလဲဟင်” “သားတို့သေသွားရင် ဘာဖြစ်မှာလဲ” အစရှိတဲ့မေးခွန်းမျိုးတွေကိုမေမေတွေအတော်များများ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းဖူးမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီမေးခွန်းတွေဟာ သူတို့မြင်တွေ့နေရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းကို ရိုးရိုးလေးမေးလိုက်ပေမယ့် အမေတွေမှာတော့ တော်တော်လေးခက်ခဲတဲ့မေးခွန်း ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ သင့်ကလေးက ဒီလိုမေးခွန်းမျိုးတွေမေးလာခဲ့ရင် သင်ကအင်းအဲလုပ်နေမှာလား၊ အမှန်တရားကိုကြိုးစားပြီး ရှင်းပြမှာလား၊ ဒါမှမဟုတ်ယုံတမ်းစကားလို ပုံပြင်တွေနဲ့ ဖြေရှင်းမှာလား။
သင့်ကလေးက ဒိုင်နိုဆောတွေက ဘာလို့သေသွားတာလဲ ဆိုတဲ့မေးခွန်းမျိုးမေးလာခဲ့ရင် အနည်းဆုံးသင်ဟာ ရူပနက္ခတ္တဗေဒနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်မှသာ အတိအကျဖြေနိုင်မှာပါ။ ဒါကြောင့််မဖြပါနဲ့ဦး စိတ်အေးအေးထားပြီး သင်လုပ်စရာရှိတာတွေကို အလုပ်များချင်ဆောင်ပြီး ဆက်လုပ်နေပါ။ သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးပညာရှိက အင်တာနက်ပါပဲ။ သင်သိချင်တဲ့အကြောင်းကို အင်တာနက်မှာရှာပါ။
ပြီးရင်သင့်ကလေးကို သူတို့နားလည်နိုင်လောက်တဲ့ ပုံစံနဲ့ ရုပ်ထွေးမှုရဲ့အသေးစိတ်ကို ရှင်းပြပါ။ သင့်ကလေးရဲ့မေးခွန်းတွေအတွက် စာအုပ်တအုပ်ထားပေးပါ။ အဆိုပါစာအုပ်ကို “အရေးကြီးမေးခွန်းများ”လို့ အမည်ပေးပြီး သင်က” ၀ိုး..ကောင်းလိုက်တဲ့မေးခွန်း၊ အဲ့ဒါကို တို့စာအုပ်ထဲမှာရေးထားရအောင်” လို့ပြောပေးပါ။
အဲ့ဒီလိုမှတ်ထားခြင်းဖြင့် နောက်ပိုင်းသင်အချိန်ရတဲ့အခါ အဲဒီ့အကြောင်းကိုပြန်လည်လေ့လာနိုင်ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ရှင်းပြပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။သင့်ကလေးက ၃စက္ကန်အတွင်းမှာ မေးခွန်း ၁၀ကြိမ်လောက်မေးခဲ့ရင်တော့ နည်းနည်းခက်ပါလိမ့်မယ်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ သိချင်စိတ်ဆိုတာ ကောင်းတဲ့ဉာဉ်ဖြစ်ပြီးတော့ သင့်ကလေးကို အနာဂတ်မှာပိုမိုသတ္တိရှိစေပါတယ်။
ကလေးတွေရဲ့အသက်အရွယ်အလိုက် သင်ကတိုတိုနဲ့လိုရင်း ရှင်းပြခြင်းဖြင့်သူတို့ကို ပိုမိုသဘောပေါက်နားလည်စေပါတယ်။ ပိုကောင်းတဲ့စည်းမျဉ်းအနေနဲ့ ကလေးတွေမေးတဲ့မေးခွန်းထက် သင်ကပိုပြီးဖြေကြားပေးဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ သင့်ကလေးတွေကို လိမ်ညာပြီးပြောတာမကောင်းပေမယ့် အမှန်ကိုမပြောနိုင်သေးခင်အချိန်ထိ သူတို့လက်ခံနိုင်လောက်တဲ့ အကြောင်းအရာကို ပြောပြထားနိုင်ပါတယ်။
ကလေးတွေက သူတို့ကြည့်ဖူးတဲ့ဇာတ်ကားထဲက ဇာတ်ကောင်တွေအကြောင်းသင့်ကိုမေးတဲ့အခါ သင်ကသူတို့ မေးခွန်းကိုမဖြေခင် သူတို့စိတ်ထဲမှာတွေးတဲ့အကြောင်းတွေကို ပြန်မေးပါ။
ကလေးတွေကို လူများတဲ့နေရာတွေမှာ တအားမပြောပါနဲ့
တခါတလေမှာ ကလေးတွေကသူတို့စိတ်ထဲမှာ ရှိတဲ့အတိုင်းရိုးသားစွာပြောပေမယ့် တခြားလူတွေကိုစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားတာမျိုးတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ “ဟိုမိန်းမကြီးက ဘာလို့ရယ်စရာကောင်းတဲ့ ဦးထုပ်ကိုဆောင်းထားတာလဲဟင်” အဲဒီလိုဆိုးဝါးတဲ့မေးခွန်းတွေအတွက် သူတို့ကိုဆူမယ့်အစား ” အိုး ဟိုကားအကြီးကို ကြည့်စမ်းပါဦး” စသဖြင့် စကားလမ်းကြောင်းလွှဲပြီး ပြောသင့်ပါတယ်။
ကလေးတွေမေးတတ်တဲ့ တစ်ချို့မေးခွန်းတွေက ကျွန်တော်တို့ကို အကျပ်ရိုက်စေပြီး ချက်ချင်းအဖြေမပေးနိုင်ပဲရှိတတ်ပါတယ်။ ထိုအခါမျိုးမှာ ကလေးကိုသင်အဲ့အကြောင်းမသိသေးကြောင်း ရိုးသားစွာဝန်ခံခြင်းဟာလည်း သူတို့ကိုစိတ်ကျေနပ်စေပါတယ်။ အရေးအကြီးဆုံးအချက်ကတော့ အပေါ်မှာပြောခဲ့သလို ကလေးတွေကို သူတို့အသက်အရွယ်အလိုက် နားလည်အောင်ရှင်းပြတတ်စေဖို့ပါပဲ။
အကောင်းဆုံးအိပ်စက် အနားယူဖို့အတွက် လုပ်ဆောင်ရမည့်အ...